Iflethi Entle Ehlaziyiweyo embindini weMinca - I-Airbnb
Iflethi Entle Ehlaziyiweyo embindini weMinca
Iflethi okanye indlu ekwicomplex Ifulethi okanye indlu ekwicomplex
entle elungisiweyo ekwindawo ephakathi eMinca kumgama wokuya kuzo zonke iindawo ezinomtsalane neevenkile zokutyela, ezilungele ukubuka iindawo neendawo ezikufutshane neSierra Nevada piedmont. Ilungele isibini.
Iflethi inendawo yokungena, igumbi, ibhedi enkulu kunye nefeni, ikhitshi elinefriji okanye i-friji enento yonke oyifunayo ukuze utye kamnandi okanye ufumane izimuncumuncu. Igumbi lokuhlambela linamagumbi aliqela ibe lelemihla lineshawa yombane enamanzi ashushu, igumbi elincinci lokuhlamba impahla elinomatshini wokuhlamba impahla kunye nendawo yokomisa iimpahla edongeni, Igumbi lokuhlambela nekhitshi zinento yonke.
Le yindawo ethandekayo yokuhlala ukuze ufumane isiphithiphithi esonwabileyo selali yaseColombia kwaye ufikeleleka lula eSanta Marta kwiimarike zobugcisa kunye neendawo zokutyela ezilungileyo ngokuhlwa.
Siza kukunika iseti enye yezitshixo xa ufika. Ndisoloko ndinokuqhagamshelana nawe ibe ndinokunceda iindwendwe ngefowuni okanye ngeimeyile xa zinemibuzo ngendlu, izinto endinokuzibona ndize ndizenze. Ndizama ukubakho ukuze ndamkele iindwendwe. Ungawuhla umthwalo wakho ngaphambi kwexesha lokufika ngoxa indawo isacocwa. Ndidla ngokuhlala eMinca kwaye ndingabuyela endlini ukuba uyandidinga.
Siza kukunika iseti enye yezitshixo xa ufika. Ndisoloko ndinokuqhagamshelana nawe ibe ndinokunceda iindwendwe ngefowuni okanye ngeimeyile xa zinemibuzo ngendlu, izinto endinokuzibo…
Inombolo yomthetho: 109902